Sika Ka-Nokulinga: Dlala Free Zincwadi Porn Umdlalo Ngoku
Sika Ka-Nokulinga: Stencils Boogaloo
Kutheni molo kukho – ke Uyohane ukusuka kwi-Cat Tail Productions kwaye namhlanje, ndiza ninoyolo ukuba akwazi ukwabelana nani kutheni wam studio wenziwe neyokusebenza kuba yokugqibela 3 iminyaka: Sika ka-Nokulinga! Thina iqalwe ekuqaleni SoV emva kwi-agasti ka-2015 kwaye emva kweminyaka emibini imveliso, thina ndabona yaba ixesha ukufumana ababelungiselela sequel. Kwaba kakhulu kunjalo ukuba yoqobo SoV kokuba ezininzi kufa-nzima ifeni, kodwa ingxaki yayikukuba ukuba akusebenzi ukuba ngenene ukuba omkhulu ka-umdlalo. Xa thina balingwe, i-porn gaming name waba ngxi pretty nascent kwaye thina hadn khange ebone na productions okokuba baba ngokwenene killer., Lento xa Cat Tail Productions bagqiba ukwenza imicimbi kwi izandla zabo kwaye kulungile, apha unayo – iziqhamo zethu basebenza! Ke uhleli ixesha elide esiza, kodwa thina ngokwenene bakholelwa ekubeni ngoku kuba omnye eyona christmas-iphenjelelwe XXX imidlalo ukuba uza ngonaphakade ukudlala. Kuza esihogweni okanye phezulu amanzi, siza kuqinisekisa ukuba ukhe ubene enikwe hottest porn olunxulumene gaming iseshoni kwazeke ukuba umntu – okanye imali yakho emva! Oh, kwaye ethetha imali: ke, kubalulekile ukuqinisekisa ukuba umzekelo-icatshulwe apha phambi kokuya na nzulu ukuze Sika ka-Nokulinga ngu ngokupheleleyo free kuba ufuna ukudlala., Ukuba u ekunene – sayina kwaye get gaming ngaphandle handing phezu ipeni! Pretty sweet, eh?
Ehlabathini-iklasi umsebenzi wobugcisa kwi-SoV
Sasisazi xa iqala lo mdlalo ukuba umsebenzi wobugcisa kokuba abe stellar, ngoko ke sikwi iindaba ukuze sibe betha zethu ekujoliswe yokwenza enjalo visually stunning umdlalo kunye mkhulu umsebenzi wobugcisa ukusuka iqela le abazobi abo bazi christmas aesthetic ngcono kunokuba ezininzi. Siza urhulumente kuba ubungqina bokuba zethu hentai ngu kancinci ngakumbi 'oluntu' kwaye realistic, kodwa thina kwaye bakholelwe weebs ngaphandle kukho ke uthando yokufumana zabo juices ephuma kwesi sixhobo phezu sprites kwaye NPCs baya kuza kwenzeka kuwo. Ngaphandle kwe-50% zethu lwabiwo-mali sangena umsebenzi wobugcisa yedwa kuba Sika ka-Nokulinga, ngoko ke ufumana ngcono bloody kakuhle bonwabele ngayo!, Thina anayithathela & ncamathiselamessage status countless iiyure hentai ukuba ngenene nail ntoni thina na kwaye dislike malunga genre. Kukholelwa kum, le iimboniselo inikwe bonke kuba ngeenjongo zophando, kwaye akhonto ingenye! Ukongeza wethu omkhulu umsebenzi wobugcisa uzakufumana rendered yi-umdlalo injini, sizo sose a inani amakhadi kwaye scenes ukuba vula nge ngocoselelo ezahlukeneyo ye-gradient kwaye uyilo. Suffice kuthi thina ukuba oku kubaluleke kakhulu indlela bale mihla adventure porn quest umdlalo. Ingaba ukulungele ukudlala? Sifuna ukuqinisekisa ukuba ithemba ke!
Nemigaqo yokusebenzisa imichiza kwi Sika ka-Nokulinga
Enye enkulu ifekta ukuba sangena zethu uyilo kunye nobume indlela waba ukuqinisekisa ukuba SoV wayenolwazi olukhulu uluvo customization kwaye osithandayo. Ukususela silindele kwaye ufuna abantu ukudlala umdlalo ezininzi phinda-phinda, ke kubalulekile ukuba kufuneka isakhono ngenene get a ifemi gripgenericname kwi yintoni eyenzekayo ukuba abe nako ukwenza ezifanelekileyo nemigaqo yokusebenzisa imichiza. Kukho emine engundoqo umthi kwiindawo personality ukuba yakho uphawu iya kuba pulled kwiintlanganiso njengoko kufuneka enze izigqibo lonke ixesha lomdlalo, kunye ngamnye omnye ngakumbi influencing yakho nemigaqo yokusebenzisa imichiza phantsi ezindleleni., Umzekelo, ukuba ufuna ukuba ibe massive dick wonke umntu, musa ukulindela ukuba umnxeba kwi ukuthandwa okanye isibini okanye ileta-indlela nge-umdlalo. Kwi flipside, ukuba bafuna ukuya kukhonza wonke umntu, chances bamele ukuba ezimbalwa NPCs ingaba ke bahamba ngqo phezu kwenu kwaye uphumelele khange kuba nako ukumisa kwabo. Njengoko usenza inkqubela-phambili ngokusebenzisa Sika ka-Nokulinga, uza kanjalo kuba inani personality traits ukuba uyakwazi ukukhetha ukuya kwi-impembelelo into yakho uphawu ingaba njani likwenza oko., Oku mhlawumbi zethu ncwadi inkqubo progression kunye dozens ka-nemigaqo yokusebenzisa imichiza, uza ufuna chonga uze ukhethe indlela ukuthatha kwabo yakho ethile, dlala ngokusebenzisa indlela. Yakho nemigaqo yokusebenzisa imichiza mba apha, ngoko ke, qiniseka ukuba ukhe ubene ukubhatala ingqalelo!
Ufikelelo kuwo onke amacebo
Omnye ibaluleke kakhulu izinto ngenxa yethu waba ukuba uqinisekise ukuba Sika ka-Nokulinga kusenokuba idlalwe usebenzisa nje esinye isandla (lento kuba obvious izizathu, akunjalo?). Kangangokuba, oko ukuqwalasela okuthethwayo ukuba porting ukuba mobile izixhobo kwaba kanye i-goci, ingakumbi ukusukela ukuba ufuna ukudlala umdlalo ngqo yakho nge-zincwadi. Sika ka-Nokulinga uya kubonelela na wena kunye stellar ufikelelo yintoni ngaphezulu, ngenxa yokuba bonke yakho ngaphandle ngaxeshanye kwiseva, yakho gameplay kwi yefowuni yakho iya tshintsha-PC yakho edition kakhulu! Qaphela ukuba thina ngoku ngokupheleleyo inkxaso ye-chrome, i-Firefox, Safari, i-opera kwaye Edge., Ngeli lixa ezinye browsers babe umsebenzi nje kakuhle, la ngamazwi okkt siza isiqinisekiso ukungqinelana kuba. Siphinda-kanjalo ucwangciso ukuze ukhuphe i-downloadable launcher inguqulelo zethu umdlalo kwi-hayi kakhulu distant elizayo – jonga le ndawo!
Achievements kwi Sika ka-Nokulinga
Ufuna ukuva a uluvo lwesikhumbuzo? Sifuna ukuva kuwe. Kwi-lapha 1.2, sidibanise 338 eyodwa achievements, bonke abathe yesiko umsebenzi wobugcisa ukuba uzaku kwazi ukuba vula, ngokunjalo ezininzi ezingaphezulu zenkohliso zisebenze, ezifana eyodwa quests, iindawo NPCs bathethe ngayo. Njengoko usenza inkqubela-phambili ngokusebenzisa Sika ka-Nokulinga, uza ufuna yithi rhoqo khangela ngaphandle ukufezekiswa indawo ukubona njani kakuhle oyenzayo. Thina isicwangciso ukongeza ngaphezu ukusebenza kwaye imisebenzi ukuze achievements kamva phantsi road, kodwa ke sikwi pretty ndonwabe kunye njani zinto azikho kuba ngoku., Sokuqala ingxelo evela ifeni kwi kunye yethu esemthethweni iiforam kwaye Discord umncedisi wenziwe overwhelmingly dibanisa: umqondiso ukuba ngenene abantu bayakuthanda Sika ka-Nokulinga kwaye yintoni uphuhliso iqela ngu ngokwenza ukuyenza eyona XXX umdlalo jikelele. Njengathi yoqobo, sifuna ingxelo evela gamers ngoko, ukuba siphinda-zinika kubo amava abazithandayo: akukho ebuzwa. Qaphela ukuba njengathi yakho ukugcina inkqubela, achievements ingaba synchronized kuwo onke amacebo kwaye igcina: nje qiniseka ukuba ukhe ubene ushicilelo oluneenkcukacha kwi enye i-akhawunti kwaye nisolko okulungileyo yiya!
Enkosi kuba ethabatha ixesha ukudlala Sika ka-Nokulinga – siyathemba ukuba ngaba uyakuthanda oku isihloko kangangoko ukusazisa uza. Zikhathalele kwaye ndonwabe gaming – meyi yakho adventure apha kuba eyona omnye kuni anayithathela kodwa embark kwi!